OutBüro नियोक्ताहरु को लागी मामला - OutBüro
केही अनुसन्धान-आधारित तथ्या with्कहरूको साथ सुरु गरौं:
नेताहरूको 98% लाग्छ कर्मचारीहरु आफ्नो कम्पनी समावेशी छ लाग्छ।
Employees०% कर्मचारीहरूले उनीहरूको कार्यस्थलहरूमा समावेश भएको भावना रिपोर्ट गर्छन्। यो नजिकको २०% भिन्नता लाई "बोध अंतर" भनिन्छ।
वर्तमान कर्मचारीहरु को ५०% आफ्नो रोजगारदाताहरु लाई विविधता र सम्बन्धित बढाउन को लागी धेरै गर्न चाहन्छन्।
% 84% एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा संग एक कम्पनी द्वारा एक काम को प्रस्ताव भने आफ्नो वर्तमान काम छोड्ने विचार हुनेछ।
Job%% रोजगारी खोज्नेहरूले खराब प्रतिष्ठा भएको कम्पनीबाट रोजगार प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने छन्, चाहे उनीहरू बेरोजगार भए।
ती मध्ये turn 68% ले कारोबारहरू भन्दा छिटो "क्विट्स" थिए। यसको मतलब यो छ कि कर्मचारीहरू अधिक मोबाइल हुँदैछन्, कम्पनीहरूले खाली पदहरू भर्नका लागि छोड्दैछन्। र सम्झनुहोस्: प्रत्येक कर्मचारी टर्नओभर कम्पनी को लागत को बारे मा 6-9 महीना को ती कर्मचारियों को तलब। एक $ 60,000 / वर्ष स्थितिको लागि, त्यो $ 45,000 घाटा हो।
२०२० मा अमेरिकी कर्मचारीहरुको लागि वार्षिक कारोबार दर ४५% थियो
रोजगारी को अवसर मा विचार गर्दा job% जागिर खोज्नेहरु विविधता लाई एक महत्वपूर्ण कारक मान्छन्।
Candidates candidates% योग्य उम्मेद्वारहरू तपाईको रोजगार बोर्डबाट टाढा क्लिक गर्छन् यदि मजबूत DEI जानकारी सजिलै फेला पार्न सकिँदैन।
हेटेरोसेक्सुअलको रूपमा पहिचान गर्ने 29० बर्ष भन्दा कम उमेरका २%% अमेरिकीहरूले सामयिक समलि .्गी अनुभव अनुभव गर्छन्।
46% of LGBTQ + कर्मचारीहरू भेदभाव र / वा उत्पीडनको डरले बन्द रहन्छन्। यो संख्या विगत दशकमा विरलै परिवर्तन भएको छ।
26% of LGBTQ + कर्मचारीहरू जो काममा बन्द रहेका छन् उनीहरु बाहिर हुन, सुरक्षित, र स्वागत गर्न चाहन्छन्।
१B% LBTQ + महिलाहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरूको यौन झुकावले नकारात्मक रूपमा काममा उनीहरूको क्यारियरको प्रगतिमा असर गर्दछ।
T०% GBTQ + पुरुषहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरूको यौन झुकावले नकारात्मक रूपमा काममा उनीहरूको क्यारियरको प्रगतिमा असर गर्दछ।
२०२2025 सम्म, सहस्राब्दीहरूले बनाउनेछ अमेरिकी कार्यबल भन्दा तीन चौथाई भन्दा बढी। मिलेनियलहरू डीआईआई मुद्दाहरूको लागि समानुभूतिशील छन् र काम गर्न चाहन्छन् जहाँ सबैलाई मूल्यवान हुन्छ र उनीहरूले उनीहरूको रोजगारदाता बारेमा राम्रो महसुस गर्छन्।
31% of LGBTQ + कामदारहरू भन्छन कि उनीहरूले स्वागत, समावेश, वा सुरक्षित महसुस नगरेको कारण काममा दुःखी वा उदास महसुस गरेका छन्।
53% of LGBTक्यू + कामदारहरूले कम्तिमा एक पटक मा समलि .्गी वा समलि .्गी व्यक्तिहरूको बारेमा सुन्ने चुटकुले रिपोर्ट गर्छन्।
20% of LGBTप्रश्न + कामदारहरूले रिपोर्ट गरिएको वा उनीहरूको सहकर्मीहरूले बुझाउँछन् कि उनीहरू अधिक स्त्रीलिंग वा मर्दानी ढ manner्गले पहिरन पर्छ।
गैर- 59%%LGBTकार्यस्थल क्षेत्रहरूको दायरामा कामदारहरू भन्छन कि उनीहरू काम गर्ने ठाउँमा यौन झुकाव र लै identity्गिक पहिचानको बारेमा कुरा गर्नु अव्यावसायिक हुन् भन्ने लाग्छ, यद्यपि उनीहरूको आफ्नै रिपोर्टिंगले गर्दा उनीहरू नियमित रूपमा पति / पत्नी, परिवार, र बाहिरको जीवनको बारेमा दैनिक कुराकानी मार्फत यी विषयहरूको बारेमा कुरा गर्छन्। काम को।
56% of LGBT वयस्कहरूले रिपोर्ट गरे कि तिनीहरू वा उनीहरूले जानेका कोहीले महामारीको क्रममा आफ्नो जागिर गुमाए जुन 44 XNUMX% गैर-LGBT वयस्कों
Employed 35% नियोजित LGBTक्यू युवा (१ 13-२24 यो) कार्यस्थल भेदभावको अनुभव भयो, ट्रान्सजेन्डर र गैरबाइनरी युवाहरूले उल्लेख गरेको ठूलो दरहरू।
आउटब्रोको LGBTक्यू सामाजिक मिडिया पहुँच - 821,000
OutBüro सक्रिय साइट सदस्यहरु - ३,३००
लिü्कडिन समूह सदस्यहरु मा OutBüro - 47,800
, 33,500०० - संयुक्त राज्यमा
3,700०० - युनाइटेड किंगडममा
१,१०० - अष्ट्रेलियामा
,,२०० - सूचना टेक्नोलोजी, सफ्टवेयर, अनलाइन मिडियामा काम गर्दछ
२,2,500०० - हेल्थकेयर, मेडिसिन, र फार्मास्यूटिकल्समा काम गर्दछ
आउटब्रोको रोजगार बोर्ड
हाम्रो काम बोर्ड तपाइँको संगठन को लागी लक्षित गर्न को लागी अनुमति दिन्छ LGBTQ + सक्रिय र निष्क्रिय उम्मेदवारहरू। आउटबरोको संगठन सदस्य भएको रूपमा धेरै प्याकेजहरूको अंशको रूपमा काम पोस्टि post्ग हुन्छ र यदि तपाईं एक-अफ नोकरी पोष्टिंगहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ भने। यहाँ पहिले नै कार्य बोर्ड प्लेटफर्ममा हालसालै पुनः सुरू भएका केही तथ्या .्कहरू छन्।
प्रबन्धक / स्टाफका पर्यवेक्षक - .41.9१.%%
अनुभवी (गैर प्रबन्धक) - २२..22.6%
कार्यकारी (VP, SVP, विभाग प्रमुख, आदि) - १.16.1.१%
प्रवेश स्तर - १२..12.9%
विद्यार्थी (स्नातक) - 3.23.२XNUMX%
वरिष्ठ कार्यकारी (सीईओ, सीआईओ, सीएफओ, आदि) - 3.23.२XNUMX%
स्नातक डिग्री - .51.6१.%%
मास्टर डिग्री - १.16.1.१%
केही कलेज - .9.68 ..XNUMX%
डक्टरेट - .6.45..XNUMX%
व्यावसायिक - .6.45..XNUMX%
उच्च विद्यालय - 3.23.२XNUMX%
एसोसिएट डिग्री - 3.23.२XNUMX%
केहि पोस्ट स्नातक - 3.23.२XNUMX%
दावी गर्नुहोस् / तपाईंको जोड्नुहोस् LGBTक्यू नियोक्ता ब्रान्डि L सूचि आउटब्रोमा
LGBTQ काम खोजी गर्नेहरूले त्यस्ता तरिकाले गैर-LGBTप्रश्न व्यक्तिहरु गर्छन्। यहाँ हामी कसरी मद्दत गर्दछौं।
अनुभवी हाम्रो दर्शकहरु संग आफ्नो कम्पनी कहानी साझा गर्नुहोस् LGBTQ काम खोज्नेहरू।
LGBTQ+ नियोक्ता ब्रान्डि
माथिबाटै प्रतिभा कायम राख्नुहोस्
एक निर्माण को आवश्यकता को बावजुद रोजगारदाता ब्रान्ड, अध्ययनहरूले संकेत गर्दछ कि यसको क्षमतालाई दोहन गर्न पर्याप्त गरिएको छैन। A 2019 सर्वेक्षण US 688 अमेरिकी नियोक्ताहरूले पत्ता लगाए कि आधा भन्दा कम कम्पनीहरूमा नियोक्ता ब्रान्डि strategy रणनीति रहेको छ। Out मध्ये १ भन्दा बढी रोजगारदाताहरूले उनीहरूको ब्रान्डि efforts प्रयासको प्रभावकारिताको बारेमा "अनिश्चित" थिए भने। अझ खराब, २%% ले भने कि उनीहरूले नियोक्ता ब्रान्डि neverको बारेमा कहिल्यै सुनेका छैनन्! हाम्रो जाँच गर्नुहोस् नियोक्ता ब्रान्डिंग सामग्री। एक प्रतिभा अधिग्रहण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षित र शीर्ष प्रतिभालाई आउटबेरोको फाइदा उठाउँदै रोजगारदाता ब्रान्डिङ सेवाहरूको सूट।
समानता भनेको गर्नको लागि सही कुरा हो र तपाईंको तल रेखाका लागि उत्तम हो
अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि जब यो जानकारी सजिलैसँग उपलब्ध हुँदैन 57% योग्य उम्मेद्वार को क्लिक गर्नुहोस्।
हाइलाइट र सामाजिक प्रमाण तपाइँको LGBTQ- अनुकूल नीतिहरु र लाभहरु। चाहे यो घरेलु साझेदार लाभ हो, ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा, लिंग-तटस्थ आधुनिक परिवार छुट्टी नीति, वा लि gender्ग-तटस्थ शौचालय, नीतिहरु, कार्यक्रमहरु, र लाभ को लागी अपील हाइलाइट गर्नुहोस्। LGBTक्यू कर्मचारीहरु।
अगाडि जानुहोस्, तपाईंको महानता टाउट
70% of LGBTQ काम खोज्नेहरू जान्न चाहन्छन् कि कम्पनी छ भने LGBTQ नेताहरु, सल्लाहकारहरु, र समुदायको भागीदारी। तपाइँको प्रयोग गर्नुहोस् OutBüro नियोक्ता प्रोफाइल प्रदर्शन गर्न को लागी LGBTQ भूमिका मोडेलहरू, के गैर-नाफा र साझा गर्नुहोस् LGBTQ- स्वामित्व वाले व्यवसायहरू तपाइँ समर्थन गर्नुहुन्छ, साझा गर्नुहोस् तपाइँका गतिविधिहरू LGBTक्यू कर्मचारी संसाधन समूह गर्छ, कर्मचारी एस साझा गर्नुहोस्uccess कथाहरु, र धेरै मद्दत गर्न को लागी LGBTQ उम्मेदवारहरू तपाईंसँग काम गरिरहेको कल्पना गर्छन्।
प्रामाणिकताका साथ बढ्नुहोस्
प्रमाणिकरण तपाइँको रोजगारदाता ब्रान्ड कथा। हामी तपाईंलाई अनुकूलन सामग्री, रणनीतिहरू विकास गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउन सक्छौं, र समुदाय सहभागिता विकल्पहरू सिफारिस गर्न सक्छौं जुन डिजाईन गरिएको हो र यसका लागि प्रचार गरिएको हो LGBTQ प्रतिभा तपाईले आकर्षण गरिरहनु भएको छ, वर्तमान कर्मचारीहरुलाई प्रसन्न पार्छ, र समुदायमा ठूलो मात्रामा ब्राण्ड जागरूकता सिर्जना गर्दछ। सबै तपाईंको इन-हाउस स्रोतहरू, हाम्रो टीम, र तपाईंको आवश्यकता, लक्ष्य, र हाम्रो समर्पित समर्थन टीमको साथ बजेटमा आधारित विशेष परामर्शको लाभ उठाउन। हामी परिचालन प्रणाली सिफारिशहरू पनि गर्न सक्छौं जुन कर्मचारी र ग्राहकहरूको विविधताको सम्मान गर्दछ।
एक सक्रिय रोजगारदाता बन्नुहोस्
आउटबोरोमा पुग्न र लक्ष्य प्राप्त गर्न LGBTQ काम खोज्नेहरू र गैर-LGBTक्यू उम्मेदवार जो मान विविधता र OutBüro मा तपाइँको कम्पनी नौकरी पदहरु संग समावेशीकरण। अत्यधिक केन्द्रित लक्षित विविधता उम्मेदवारहरु संग तपाइँको खुला स्थिति को दृश्यता अनुकूलन। हाम्रो बढ्दो उम्मेदवार रिपोजिटरी खोज्न सकिन्छ र नयाँ आवश्यकताहरु को मेल खान को लागी तपाइँको आवश्यकताहरु संग मेल अलर्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि अधिक योग्य LGBTQ उम्मेदवारहरूले हाम्रो नियोक्ता ब्रान्डि solution समाधानको साथ तपाईंको खुला जागिरहरू देख्दछन् र लागू गर्दछन्। LGBTQ वर्चुअल क्यारियर मेलाहरू एजेन्डामा अर्को हुनेछन्। एक प्रारम्भिक अपनाउने बन्नुहोस् र जीवनमा यी नयाँ सुविधाहरू ल्याउन मद्दत गर्नुहोस्।
डाटा कार्यक्षम छ
OutBüro मा, हामी एक व्यापक विविधता अध्ययन को विकास गरीरहेका छौं। वैकल्पिक रूपमा, तपाइँको साझेदारी संग कुनै पनि बिन्दु मा, हामी तपाइँको संगठन मा अंतर्दृष्टि को लागी तपाइँको कर्मचारीहरु र/वा ग्राहकहरु लाई यो रोल गर्न सक्छौं। तपाइँको अध्ययन तपाइँको चिन्ता र लक्ष्य संग प align्क्तिबद्ध गर्न अनुकूलित हुन सक्छ। तपाइँको नतिजाहरु तपाइँ संग साझा गरिनेछ, ठूलो सेट को तुलना मा, र तब ठूलो अध्ययन पूल मा एकत्रित। कुनै पहिचान योग्य जानकारी साझा गरिएको छैन।
तपाईंको विविधता आपूर्ति श्रृंखला मजबूत गर्नुहोस्
जडान गर्न को लागी आउटबेरो LGBTQ- स्वामित्वका व्यवसायहरू तपाईंको संचालन र विकासलाई समर्थन गर्न पूर्ण स्पेक्ट्रम उत्पादनहरू र सेवाहरूको लागि तपाईंको विविधता आपूर्तिकर्ता कार्यक्रमको हिस्सा बन्न। हाम्रो विविधता आपूर्तिकर्ता भर्चुअल म्याचमा भाग लिनुहोस्।
LGBTQ- स्वामित्व वाले व्यवसायहरू प्रत्येक कल्पनाशील उद्योगमा छन्।
पुग्नु LGBTQ स्वामित्व वाला व्यवसाय
के तपाइँ उत्पादनहरू वा सेवाहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ र पहुँच गर्न चाहानुहुन्छ LGBTQ एक लक्ष्य को रूप मा उद्यमीहरु दर्शक? तिनीहरूलाई आउटबरोमा पुग्नुहोस्।
ग्राहकहरु संग कनेक्ट गर्नुहोस्
तपाईंको LGBTQ कार्यस्थल विविधता अत्यन्त महत्व राख्दछ LGBTQ उपभोक्ताहरू कुनै पनि अन्य उपभोक्ता जनसांख्यिकीय विपरीत।
LGBTQ उपभोक्ताहरु खाली मार्केटि want चाहँदैनन् - उनीहरु प्रामाणिकता चाहन्छन्।
को संयुक्त खरीद शक्ति LGBT अमेरिकामा वयस्कहरू 917 2016 १ billion अरब र बढ्दो छ! (स्रोत: Witeck संचार २०१ XNUMX)
LGBT पुरुष र महिलाहरूले he 35% बढी समय अनलाईनमा आफ्नो समलिose्गी समकक्षहरू भन्दा बढी खर्च गर्छन् (नीलसेन २०१ 2015)
LGBT परिवारहरूले औसत अमेरिकी घर (नील्सेन २०१ 10) भन्दा १०% बढी किनमेल यात्रा गर्छन्।
केहि थप नियोक्ता संसाधनहरू:
ग्लासडोरको विविधता र समावेशी कार्यस्थल सर्वेक्षण
कसरी LGBTQ + कार्यस्थलमा समुदाय भाँडा - म्याकेन्से द्वारा
शोध संक्षिप्त: LGBTQ कार्यस्थलमा युवा - ट्रेभर परियोजना
एक वैश्विक संगठन भरि समावेशी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै - हार्वर्ड
नयाँ LGBTQ कार्यबल आइपुग्यो — समावेशी संस्कृतिहरू अनुसरण गर्नुपर्छ - BCG
थप LGBT व्यक्तिहरू भन्छन कि उनीहरूले जागिर गुमाए, महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावहरू सामना गरे
नियोक्ता ब्रान्डि:: पुग्दै LGBTQ उम्मेदवारहरू
समर्थन गर्ने १ W तरिकाहरू LGBT कर्मचारीहरु
LGBT विविधता र समावेशीकरण: बेनिफिट कम्पनी, कर्मचारी र ग्राहकहरू
LGBTQ उपभोक्ता र नियोक्ता ब्रान्डि Com कम गर्दै छन्
LGBTQ नियोक्ता ब्रान्डिंग प्लेटफार्म समर्थन LGBTQ कर्पोरेट समानता
मानवअधिकार र iring%% पेशेवरहरुलाई रोजगारदाताहरु भन्छन् कर्मचारिको अनुभव बढी महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ। विविधता र समावेशी हायरिंग सबैभन्दा बढी अra्कित प्रवृत्ति हो जुन resource 96 प्रतिशत मानव संसाधन निर्देशकहरू र भर्तीकर्ताहरूले जवाफ दिन्छन् कि उनीहरू विविध प्रतिभालाई काममा लिइरहेका छन्, हेड-ऑन। किन? खैर, companies 78% कम्पनीहरूले प्राथमिकता दिइरहेका छन् विविधता सुधार गर्न संस्कृति, र %२% वित्तीय प्रदर्शन बृद्धि गर्न त्यसो गर्दै छन्। जबकि भर्तीकर्ताहरु 62 55% समय मा भाँडामा लिने कम्पनीको मानहरु संचार गर्न असफल हुन्छन् र जब आउँदछ LGBTक्यू उम्मेदवारहरू।
यस अनुसार २०२० लिंक्डइन प्रतिभा प्रवृत्ति रिपोर्ट